Nin si qarsoodi ah u bixiya lacagaha bukaannada - BBC News Somali
Nin si qarsoodi ah u bixiya lacagaha bukaannada
21 Disembar 2018
Gudaha Nigeria, adeegyo yar oo caafimaad un baa bilaash ah, haddii aadan bixin biilasha isbitaalka laguuma oggolaanayo inaad baxdo. Yaa ku caawinaya? Bulshada ayaa rajeyneyneysa inay caawinaad helaan.
Zeal Akaraiwai - waa qof iska caadi ah, wuxuu wataa gaari Mercedes oo madow ah. Ninkan ku jira da`da afartameeyada ahna la taliye dhanka dhaqaalaha ah ayaa ka soo degay gaarigiisa wuxuuna galayaa isbitaal ay dowladdu leedahay oo ku yaalla magaalada Lagos. Waxaa si diirrran u soo dhoweynaya koox isbitaalka ka tirsan, wuxuuna toos u guda galayaa shaqadiisa. Wuxuu weydiinayaa liiska bukaannada.
Waxaa loo keenayaa warqad ay ku daabacan yihiin magacyada bukaannada doonaya inay guryahooda ku laabtaan, balse aanan bixi karin, sababtoo ah maysan bixin lacagta adeegga caafimaadka.
Kalkaaliso 500,000 oo doolar lagaga xaalmariyay xirid
Nairobi : Dhaqtar madaxa qaliin kaga sameeyay qof aan ahayn kii u baahnaa
Zeal ayaa la kulmay dad lagu qasbay inay isbitaalka joogaan muddo lix ilaa siddeed toddobaad ah, kaddib markii ay bogsadeen. Qaar ka mid ah isbitaallada Nigeria waxay oggol yihiin in qayb qayb loo bixiyo lacagaha, balse qaybta ugu horreysa ayaaba ku adag bukaannada qaar ee saboolka ah.
Zeal ayaa ku dhex lugeynaya qaybaha isbitaalka isagoo dhegeysanaya hadalka shaqaalaha. Qaybta ragga waxaa ka muuqata dayac, 20 sariir ayaana taalla.
Shaqaalaha isbitaalka ayaa geynaya Zeal sariir uu ku jiifo bukaan ay lugta faashad uga duuban tahay. Wuu u dhowaanayaa, cod gaaban ayuuna kula hadlayaa: "Maxaa kugu dhacay?" Ninka dhalinyarada ah, oo tima-jare ah, ayaa sheegay in la toogtay, balse uusan aqoon qofka toogtay.
"Marka sidee ayaad dooneysaa inaad u bixiso lacagaha isbitaalka?" ayuu weydiinayaa Zeal. "Ilaah baan baryayaa," ayuu ninku ku jawaabayaa.
Zeal ayaa in muddo ah la sheekeysanaya bukaanka - ninku ma weydiinayo qofka uu Zeal yahay, sidoo kalena Zeal iskuma sheegayo. Kaddib, meel aan ka fogeyn bukaanka, Zeal ayaa weydiinaya kalkaalisada lacagaha laga doonayo ninkaasi oo ah $250. Tima-jaruhu wuu nasiib badan yahay - Zeal ayaa bixiyay, sidaasi ayuuna bukaanku ku aadayaa gurigiisa.
Zeal lama xiriiro dadka uu caawiyo. Xitaa ma doonayo in loo mahad celiyo. Balse waxaa jira hal shey oo uu doonayo in loogu abaal-gudo - taas oo ah in maalin uun ay dadkaasi ka sheekeyn doonaan sida ay isbitaalka uga soo baxeen, sida in qof aan la arkeyn uu yimid oo uu lacagaha isbitaalka ka bixiyay kaddibna iska tagay.
"Waa sababta aan mashruucan ugu bixiyay Malaa`ik," ayuu yiri. "Noqo qofka aad jeclaan lahayd inaad la kulanto.
Inuu bixiyo lacagaha bukaannada isbitaallada, waa mid ka mid ah rajooyinka Zeal. Wuxuu sheegay inuu doonayo inuu dadka tuso in qof walba uu sameyn karo wax uu dadka kale ku caawiyo. Saaxiibbada Zeal iyo qoyskiisa ayaa sidoo kale ku caawiya lacagta.
Qaybta haweenka ayaa la geeyay Zeal si uu u arko haweeney ku jirta da`da 60-meeyada, oo aan miir lahayn. Kalkaalisada ayaa ka dooneysa Zeal inuu bixiyo lacagaha lagu leeyahay bukaankaas, si loo geeyo meel gaar ah oo lagula tacaalo xaaladdeeda.
Marka uu ka dhaqaaqo haweeneydaas, wuxuu la kulmayaa gabadheeda oo ah qof dhalinyaro ah, wuxuuna weydiinayaa caafimaadka hooyadeed. Xitaa haddii uu biilka bixiyo, waa un tallaabadii koowaad, haddii ay haweeneydaasi badbaaddo. Zeal ayaa si naxariis leh ula hadlaya gabadheeda wuxuuna u sheegayaa inuu ka xun yahay. Way u mahad celinaysaa, waxayna aadeysaa halka ay hooyadeed jiiftay.
Zeal wuxuu ka murugeysan yahay mashruuciisan bixita lacagaha bukaannada ee isbitaallada ku jira, wuxuuna ka careysan yahay sida ay dowladdu ugu guul darreysatay daryeelka bulshada.
Bulshada ku nool dalka Nigeria keliya 5% ayaa haysta caymis caafimaad. Waxaana ku nool malaayiin qof oo sabool ah.
Dowladda Soomaaliya: Albaabka wadahadalka waa furanyahay balse go'aankii baarlamaanka waa sidiisii
Muxuu Facebook u sameysanayaa adeeg la mid ah Clubhouse?
TOOS Qarax bam ah oo lala beegsaday gudoomiye ku xigeenkii degmada Dayniile
Ragga Shiinaha u dhashay ee ka badbaaday Titanic welina la la'yahay